Ingxenyana engaphansi kwelitye
Isiseko sendlu, kude kube kutshanje, saqulunqwa ngezinto zokwenza izinto esiziqhelekileyo kuzo: iitye, izitena, imixube ngokuxhomekeka kwentente, ngokungaqhelekiyo - imithi. Zonke ezi ntlobo zokugqiba, ngaphandle kwelitye, zifuna ukugcinwa rhoqo kunye nokulungiswa kwexesha elide, ngelixa iindleko zempahla kunye nomsebenzi ophathelene nokugqitywa kwe-socle yayingabizi. Akumangalisi ukuba emva kokuveliswa kwemveliso yombutho, kufuneke kakhulu. Ukukhwelisa, njengento ephathekayo yokugqiba, ukufudumala nokukhusela isalathisi, namhlanje ibonwa njengeyona ndlela isisombululo esona sisisigxina.
Ukuguqulwa - yiphaneli eyenziwe ngeentlobo ezahlukeneyo zendalo kunye nezinto zokufakelwa. I-vinyl siding phantsi kwelitye , ekuboneni kuqala, kunzima ukuhlukanisa ilitye lemvelo, ngelixa kulula ukuyifaka.
Uyilo lokubhinqa kwendlu, kunye nokugqitywa kwepinth engxenyeni phantsi kwelitye, libukeka luphawulekayo kwaye lusebenza kakuhle, ngelixa lwandise amandla, ukuchasana nokubonakala kweempembelelo zangaphandle. Iipaneli ezicwangcisiweyo phantsi kwelitye nazo zilungile kuba zingenzi umthwalo owongezelelweyo kwisiseko, ngokungafani nezinto eziphathekayo, xa i-plinth iphelile. Ukugqibela okunjalo kwesola, ngokudibeneyo kunye nezinye izinto zokugqiba.
Itheknoloji yamanje, evelisa iipaneli, esebenzisa iipolymers, usebenzisa i-injection molding, ibonelela ngobomi benkonzo ende.
Eyona nto ilula kakhulu ekufakekeni kwendoda yecala, eyenziwe ngentsimbi, eyenziwa phantsi kwelitye, le nto ingagqitywa unyaka wonke. Olu hlobo lwesigxina lunokwethenjelwa kwaye lukulungele ukulungiswa, ukumelana nokunyameka kokunyamezela, njengoko kukhuselweyo kwi-corrosion kunye ne-fungus. Ubomi benkonzo obuqinisekileyo buyiminyaka engama-50.
I-Socle siding ifumene isicelo esikhulu kunazo zonke ekwakheni nasekulungiseni izindlu phakathi kwabantu. Ingakumbi impendulo eninzi malunga nokusetyenziswa kwe-socle siding phantsi kwelitye. Ukuyifaka isicelo sokugqiba isalathisi, indlu ibonakala icebile kwaye ibonakala, ininzi imali esetshenziselwa ukusebenzisa ilitye yemvelo yendalo. Ukuhlaziywa ngokufanelekileyo kunye nokunyamekela ukucocwa kwamanzi, ukucocwa kwamanzi okuqhelekileyo, okunokuthi kwenziwe kwimizuzu emininzi ngonyaka, nje ukucoca i-cap nge-jet yamanzi kwi-hose.
Ingaphakathi kwigumbi lentombazana
Izibane zelitsha zokuhlambela
Ifenitshala ye-dacha ngezandla
Ubhedu lweemabula zelitye - zeziphi iimpawu zokuyila zineemarble?
Amakhethini aseBlue - iingcamango ezintsha zokufezekiswa kwendawo yangaphakathi
I-Bed-loft eneendawo zokusebenza
I-sofa transformer ye-Inflatable
Indawo yomlilo evela kwi-plasterboard
Idizayini yokulala yangoku
Izinto ezili-18 ozifungelayo ukuba ungazenza xa uba ngabazali
Iklabishi ebosiweyo ngeqanda
Iifolo zeekati ngezandla zabo
Izihlalo zegumbi lokuhlala - njani ukhetha izitulo zangaphakathi?
Intsimbi emzimbeni kunye nendima yayo
Izilumhlophe ezimhlophe emanzini omntwana
Ukubonakala komntu webhishini
Indlela uAnita Tsoi alahlekelwa ngayo isisindo - ukutya
Ukuphululwa kwezixhobo zembatho
Umzila we Morten Trotzig
Uya kuhleka, okanye udumo aluyikrele, njengoko abalandeli bayalithabatha!
Flavored Fashion 2013
Yintoni eya kufakelwa entwasahlobo ka-2015?
Ingulube ilala - zokupheka
Amakhonkco kwisitayela seloft
Utamatisi - izifo kunye nezinambuzane